Nokufamba pakati Cinque Terre nderimwe chakanakisisa zvinhu zvokuita Italy, uye mumwe Best musango kutanga pfungwa. Its musango mudungwe munzira ndezvimwe zvezvisarudzo dzakanaka Europe uye kana uri panze anoda kana chete munhu anoda vamwe pachiitwa pakati dzakaora Italian zvokudya, ndiyo imwe hunogutsa nzira kunakidzwa Italy kuti yevedza yegungwa.
• Kamwe kuItaly, tichibatsirwa Save A Train , chitima ichiri nzira yakanakisisa asvike Cinque Terre. Pane munharaunda chitima, ari Cinque Terre Express chitima, iyo unotevedza mhenderekedzo pakati nhepfenyuro Centrale pamusoro La Spezia uye Levanto. It Anodzivisawo zvachose maguta mashanu (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), uye imi muchava vanofanira kutora kufamba pakati pavo kamwe uri munzvimbo (kana iwe vasarudze kuti aende pamusoro inogarotaurwa kudenha mudungwe munzira). Sezvo kwezhizha 2016, mari Cinque Terre Express ndiye € 4 pa rwendo. Munguva kure-mwaka, yemanyorero kubva November kusvika March, kuti mutengo anodonhedza kuti € 1,80. chitima Izvi hazvirevi kupa reserved zvigaro.
• Pavakasvika kubva Florence kana Rome: Kune vashoma zvakananga nezvitima pazuva Firenze Santa Maria Novella yemapurisa La Spezia Centrale; vamwe zvinoda kuti kuchinja nezvitima muna Pisa. Mitengo kutanga € 13,50. At La Spezia, kuchinja Cinque Terre Express.
The Eagle Walk rinoumbwa 23 yakabatana nzendo, vanotevera mweya-kutora nzira kuburikidza Tirol. The Best musango kutanga pfungwa mudunhu, zvikamu zvizhinji hunogona kungoparara kuvhurwa muchishandisa waya motokari uye rakapedzwa wenguva- kana hafu- zuva kushanya. Tinoda nezveupenyu kuti chikamu chedu kufarira kuti Blog ino.
Ungave uri kuronga zuva kwidza kana multi-vhiki uchinzvera ari makomo, uchawana Eagle Walk kuva mukuru panze ruzivo. Rinopa mikana risingaenzaniswi kuongorora, kuwana uye anobatana hunhu.
A hafu- zuva vanofamba neapo vaibvakacha. Kubva Kramsach muna Lower Inn Valley, kutora chigaro vachasimudza kuna Sonnwendjoch imba. A pfupi vanofamba kunotungamirira kune rine runyararo Zireiner nyanza, iro riri mumupata anenge 1,800-metres pamusoro pegungwa - nzvimbo huru kutonhore. inopisa chirimo mwedzi. The kufamba unoramba Zireiner Alm mafuro (1,698M) asati adzokera pamusoro cheya chikwidzo, kubvumira kuti atasve shure kuburuka Inn Valley.
Zviri nyore famba kubva kuUK kuenda Austria nechitima. Unogona kuenda kubva London kuna Vienna, Salzburg kana Innsbruck mune rimwe zuva na soro-nokukurumidza chitima. Kana kutora zvemasikati Eurostar kubva London kuenda kweBrussels, a Thalys yakakwirira-kumhanya chitima kuti Cologne uye vakaisvonaka Nightjet akarara chitima kuna Innsbruck, Linz kana Vienna husiku. Achangosvika ikoko, kusvika Tirol zviri nyore yayo nzwisisika richikurukura paruzhinji senga. Zviri nyore kuenda vakapoteredza nharaunda kushandisa nezvitima. Vanofamba achida kuita chikamu kana zvose yeGondo Walk kuwana pakutanga uye pakupedzisira pfungwa nechimwe pechikuva kushandisa omunharaunda mabhazi.
The Camino anozivikanwa mu Chirungu sezvo Munzira St James. Yese nzira dzeCamino mafambiro dzinotungamira dzinoenda kuSantiago de Compostela sekuno ndiko kusara kweSt James, (Santiago), dzakafukurwa muzana remakore rechipfumbamwe. Iyo yekufambisa yaifarirwa mune gumi, 11vakasuwa uye remakore rechi12 uye yozononokera kutsauka kukurumbira.
Muzana remakore rechi21, pfungwa imwe outorwa zvichida sokunofadza. zvisinei, kuti nesimba wokufamba kwemwedzi uye akochonorwa kuti ano mano iri chaizvo kusunungura.
Sarria ndiye guta Zvinosarudzwa Mapilgrim sezvo pfungwa mavakanga kutanga kuita Camino of Santiago. Vanopfuura 300,000 Mapilgrim vaifamba Santiago de Compostela mu 2017, zvimwe 60% akanga asarudza kutevera Camino Frances. Uye kupfuura 80,000 vavo akasarudza Sarria dzavo pokutangira. Huru zvikonzero kusarudza Sarria ndechokuti rinopa shoma kure zvaidiwa parwendo kuti paakavapa ari Compostela (ari yomupilgrim chitupa). Daro kuna Santiago kunogona akafukidzwa mumatanho chete mashanu uye Anozvirumbidza vazhinji pokugara mikana uye basa vechinamato. Sarria zviri nyore kusvika musi mabhazi kubva dzakasiyana-siyana Spain.
Most musango atambanudza zvinogona vakarambana mu nyoreka akareba. Nokuti misha yakawanda achitevedza musango mudungwe munzira unogona Wakasvika zvakanaka nechitima. rubatsiro zvikuru kuronga kwidza ndiro mepu pachena pamusoro Schwarzwald Tourismus GmbH (Ludwigstrase 23, 79104 Freiburg, www.blackforest-tourism.com). Inotaridza zvese zvechitima uye zvebhazi nzira dzeKONUS mudunhu nekumhiri.
Akagadzirira kupfeka yako musango majombo uye kunakidzwa nevamwe hunhu musango? Book chitima yako mukati maminitsi uye NO imwe mari pa Save A Train !
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-hiking-start-points/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)